Shirkad Ethiopian ah oo Diyaarinaysa Qabashada Aroos 1,000 Qoys ah – Rasaasa News
Feb 24, 2012 000 Qoys ah, Shirkad Ethiopian ah oo Diyaarinaysa Qabashada Aroos 1
Addis Ababa, February 24, 2012 [ras] – Hormuudka diyaarinaya xaflada ayaa daaha ka qaaday in ay qaban doonaan xaflad wada jir ah oo loo samaynayo 1,000 qoys oo is Aroosaya bisha June ee soo socota sanadkan 2012.
Arintani waxay qayb ka tahay guur wada jir ah oo ay qabanayso shirkad ku shaqo leh isu keenida lamaanayaasha lagana leeyahay Ethiopia, xaflada arooska wada jirka ah ayaa ka dhacaysa Addis Ababa, oo ay reer ku noqon doonaan kun lamaane.
Dhacdadan oo la filayo in ay kordhin doonto tirada lamaanayaasha raba in ay is guursadaan, laakiin aan awoodi karin kharashka xaflada Arooska, arintaas oo ay ugu wacan tahay bulshada iyo dhaqaaluhu, sidaas waxaa yidhi Qabanqaabiyaha xaflada.
Qaban qaabiyaha ayaa sheegay in arintani ay horseedayso in aduunku barto dhaqanka iyo hidaha kala duwan ee Ethiopia.
Waxaa arintani taageero ka heshay madaxda dawlada, hogaamiyeyaasha diimaha, ganacsatada iyo shakhsiyaad muhiim ah.
Shirkadu ma sheegin in ay bixinayso kharashka safarka, jiifka iyo cuntada inta ay Addis Ababa joogaan lamaanaha is guursanaya.
Arintani waxay muhiim u tahay dhalinyarada doonaysa in ay is guursadaan oo aan wax kharash ah kaga baxayn Arooska iyo iyaga oo magac kala hadhi doona xafladan Arooska wada jirka ah.
Tacsi: Xaaji Maxamed Daahir Ibraahim oo ku Geeriyooday Qabridahare